Maitiro Ekuti Upinde muWheelchair - Chinjana muWheelchair
Kuti upinde mu wiricheya, mushandisi anofanira chinja mutumbi wavo kuchigaro chechigaro. Kune nzira dzakawanda dzekuchinjisa kuita wiricheya chigaro; chinonyanya kukosheswa mabhureki achiaisa panzvimbo, uye kumisikidza chigaro munzvimbo yakatwasuka kusvika kumakumbo ako. Iyi ndiyo nzira yakapusa yekupinda wiricheya chigaro.
Kune dzimwe nzira dzekuchinjisa mu wiricheya; zvimwe zveizvi zvinoda rubatsiro rwemuchengeti kutendera mushandisi kuchinjisa nerubatsiro rweumwe munhu. Uyu anonzi 2-munhu wiricheya chinja, icho chinoshandiswa kana murwere asingakwanise kusiya chigaro pasina rubatsiro.